कस्तो छ, खजुराको नीति तथा कार्यक्रम ? - Arthapage
कस्तो छ, खजुराको नीति तथा कार्यक्रम ?
प्रकाशित मितिः १० असार २०७७, बुधबार १७:१६ June 24, 2020
खजुरा : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको जिनति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षतिले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, पुर्वाधार र रोजगारीलाई जोड दिएका छन ।
कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिककरण गर्न सहुलियत विउ विजन, सिचाई, प्रविधि, तालिम, पकेट क्षेत्र स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । बाँझो जग्गाहरुको एकिकृत संकलन गरि पुन उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भुमि बैंकको अवधारणा अघि बढाइने छ । उक्त कार्यलाई प्रोसाहन गर्न सहुलियत मिलाउने र अनुदानका कार्यक्रम सन्चालन गर्नेका साथै कोभिड १९ विषेस कृषि कार्यक्रम सन्चालन गरिने नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले बताए ।
स्वास्थ्य तर्फ स्वस्थ गाउँको अवधारणा अनुसार स्वच्छ खानेपानि, सुविधा सम्पन्न सौचालय लगाएतका सुचकहरु त्यार गरि लागु गरिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्रि बनाइने, एकिकृत र दिगो स्वास्थ्य सेवा प्रणालिको सस्थागत संरचनाको विकासमा जोड दिइएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई ६/६ महिनामा विशेषज्ञ सेवा सहितको निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने, ८४ वर्ष पुरा भएका अति विपन्न वर्गका लागी आर्थिक सहयोग गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन विकासलाई पनि नीतिमा समेटेको छ ।
पर्यटन तर्फ होमस्टेको अवधारणालाई अघि बढाइने, खजुरा ४ मा पर्यटकियस्थलको विकास गरिने नीति लिएको छ । पुर्वाधार विकास तर्फ सडक, तथा पुल, सिचाई, लघु तथा साना जलविद्युत लगाएतका विकास गर्दा बातावरण मैत्रि गुणस्तरिय विकासमा जोड दिइनेछ । शुसासन पारदर्शिता, जवाफदेयिता, र उत्तरदायि शासन प्रणाली तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न निति लिइएको छ ।
गाउँपालिकाको सिफारिसमा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई बैंक वित्तीय सस्थामार्फत १० लाख सम्म विना धितो कर्जा उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले प्रस्तुत गरेका छन । स्थानिय स्रोत साधनको पहिचान गरि यसको अधिकतम उपयोग गर्ने, रोजगारिको अवसर सिर्जना गरि गरिवी न्यूनिकरण गर्नै नीति लिइएको कक्षपतिले जनाए । प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको प्रदेशस्तरिय विश्व विद्यालय स्थापना र सन्चालनमा ल्याउन गाउँपालिकाबाट आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराइने नीति लिइएको छ ।
प्रकाशित मितिः १० असार २०७७, बुधबार १७:१६ |
Prevनक्कली धितोबाट १ करोड २५ लाख ऋण, नेपालगन्जका सुनचाँदी व्यवसायी समातिए
Nextनेपालगन्जको बजेट एक अर्व ४७ करोड(पूर्णपाठ सहित)